Adelaide (/ ædəleɪd / (Ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya) AD-ə-layd)  waa caasimadda gobolka Koonfurta Australia, iyo magaalada shanaad ee ugu badan Australia. Bishii Juunyo 2017, Adelaide wuxuu lahaa dad lagu qiyaasey inay deggan yihiin 1,333,927.  Adelaide wuxuu hoy u yahay boqolkiiba 75 oo ka mid ah dadka reer South Australia, taas oo ka dhigaysa dadka ugu badan ee ka dhexeeya gobol kasta ee Australia.
Astaanka Magaalada Adelaide
Adelaide waa waqooyiga Fleurieu Peninsula, adaha Adelaide ee u dhexeeya Gacanka St Vincent iyo Buur-jiifka Lofty Ranges ee ku wareegsan magaalada. Adelaide ayaa 20 km (12m) ka soo wareegta xeebta ilaa hareeraha, iyo 94 ilaa 104 kiiloomitir (58 illaa 65 malyan) oo Gawler ku taala waqooyiga ilaa Sellicks Beach ee koonfurta.
Magaca sharafeed ee Adelaide Saxe-Meiningen, boqoradda boqoradda King William IV, magaalada ayaa la aasaasay 1836-kii markii loo qorsheeyey caasimadda si xor ah oo degan gobolka British ee Australia. Colonel William Light, oo ka mid ah aabayaasha aasaasiga ah ee Adelaide, ayaa naqshadeen magaalada, waxayna doorteen meel u dhow Wabiga Torrens, oo ah degaanka asal ahaan deggan Kaurna. Naqshaddaha iftiinka ah ayaa Adelaide ku soo rogay qaab dhismeedka shabakadda, iyada oo ay weheliso munaasabado balaadhan oo ballaaran iyo goobo ballaaran oo dadweyne ah, oo gebi ahaanba ku hareeraysan goobaha jardiinooyinka. Adelaide hore waxaa loo qaabeeyey barwaaqo iyo hanti - ilaa Dagaalkii labaad ee aduunka, waxay ahayd magaalada saddexaad ee ugu weyn Australia iyo mid ka mid ah magaalooyinka Australia oo aan lahayn taariikh dembi. Waxaa la xusay tusaalooyin hore ee xorriyadda diinta, ballanqaadka horumarinta siyaasadeed iyo xoriyada madaniga ah  Waxaa loo yaqaan "The Church of Churches" taniyo qarnigii 19-aad, iyada oo la tixraacayo kala duwanaanshaheeda diimeed halkii ay ka muuqan lahaayeen cibaadada ay ka muuqato. Jinni "Adelaidean" waxaa loo adeegsadaa magaca magaalada iyo dadka deggan.  
Sida xarunta Koonfur Australia ee xarunta dawladda iyo ganacsiga, Adelaide waa goobaha hay'ado dawladeed iyo kuwo maaliyadeed. Inta badan kuwan waxay ku yaalaan bartamaha magaalada oo ay ku yaalaan xaafadaha dhaqanka Waqooyiga Terrace, King William Street iyo degmo kala duwan oo ka mid ah agagaarka caasimadda. Maanta, Adelaide waxaa lagu xusay dhacdooyinka iyo dhacdooyinka isboortiga badan, cuntada iyo khamriga, xeebaha dheer, iyo qaybaha difaaca ee waaweyn iyo wax soo saarka. Wuxuu si heer sare ah u yahay tayada nolosha, isagoo si joogta ah u liis garaynaya 10ka ugu sareeya adduunka ee lagu noolaan karo, oo laga soo doorto 140 magaalo oo dunida oo dhan ka socota Waaxda Sirdoonka ee Dhaqaalaha.      Waxa kale oo ay kaalinta ugu sarreysa ku leedahay magaalada ugu badan ee Australiya ah by Golaha Hantida Australia ee 2011,  2012  iyo 2013. 
Adelaide waa magaalo oo kuyaalo dalka Australia. Waana caasimada gobolka South Australia.
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Adelaide.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Adelaide&oldid=180642"
Last edited on 15 Sebteembar 2018, at 12:01
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 15 Sebteembar 2018, marka ee eheed 12:01.